6 Midwest Pizza Styles kọwara - Nri
Nnukwu 6: Everydị westerndị Pizza ọ bụla nke Midwest, kọwara
Big 6 Every Type Midwestern Pizza Style
Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịgwụ ike maka nnukwu agba agba, chiiz a wụrụ awụ nke pizza miri emi, ị dị njikere ịgbasawanye ihe ọmụma Pizza mpaghara gị. N'ebe a, pizzas dị iche iche Midwest dị mkpa ka ị gbalịa tupu ị họrọ ọkacha mmasị gị.
Njikọ: Ihe zuru oke French fries na Chicago
Pizzeria Uno / Facebook
A gaghị agbanahụ efere miri emi mgbe ị bi na Chicago. Ma ị hụrụ ya n’anya ma ọ bụ asị, ịmara ya. Mana ị maara na Pizzeria Uno mepụtara ya na 1943 iji dị iche na pizzerias ndị ọzọ na mgbochi? Toppings nwere ike ịdị iche, mana ihe ndị ahụ dị mkpa na-amalite site na ahịhịa ọka, cheese, soseji na mgbe ahụ ihendori.
Ebee inweta ya n'obodo: Pizzeria Uno
Giordano''s Pizza / Facebook
Ihe dị omimi
N'oge ụfọdụ, e kpebiri na pizza miri emi anaghị ezu ezu. Efere miri emi nwere otu ihe owuwu, mana ya na akwa ọzọ nke dị n’elu (n’okpuru ihendori). Akụkọ mgbe ochie nwere, Giordano chepụtara ụdị ahụ.
Ebee inweta ya n'obodo: Giordano si
Yelp / Rebecca M.
Nri miri emi abụghị maka mmadụ niile, ọbụnadị onye ọ bụla nọ na Chicago. Ma otu a, anyị nwere eriri dị mkpa nke Chicago (ka aghara ịghọtahie gị na New York), mgbe ụfọdụ a na-akpọ ụdị tavern. Ga-amata ya site na ya cracker-y jikọrọ ọnụ na akụkụ anọ nwere akụkụ, nke na-eme ka achịcha dị mfe karị.
Ebee inweta ya n'obodo: Aurelio si
Imo’s Pizza / Facebook
Nwa nwanne nwanne na Chicago dị fere fere, St. Louis pizza nwere ọbụna mpempe akwụkwọ dịka ihe eji eme achịcha na-ekoghị eko. N’ezi ya, a na-ejikwa ihe ngosi na-atọ ụtọ na Provel mekwara ya, ngwakọta nke Switzerland, cheddar na provolone mepụtara kpọmkwem maka ụdị nke ndị Imo, onye bidoro ya.
Ebe ị ga-enweta ya na obodo: You nwere ike ibute pizza oyi kpọnwụrụ Imo’s , ma ọ bụ ịnwere ike ịnwale ihe kachasị mma na Chicago, D'Agostino's (ha anaghị eji Provel, mana ọ ka yum).
Mgbọrọgwụ Pizza / Facebook
Ihe mbụ ị ga - ahụ maka pizza Quad Cities bụ na e bee iberibe ahụ ogologo ogologo. Ma ihe ga-arapara n'ahụ gị bụ eriri. Ejiri syt malt, o nwere udiri ihe dika uzo na udara. Nke a bụ otu achịcha ebe ọbụlagodi ndị na-eri nri ndị kacha mma ga-egbutu ala ahụ.
Ebee inweta ya n'obodo: Mgbọrọgwụ
Na-abịa gburugburu (ụdị dị ka Pizza, ma e wezụga ụdị a), ụdị nri Detroit na-eche ihu n'akụkụ miri emi mana ọ naghị abanye n'ókèala miri emi. Otu nkpuru nke Sicilian Pizza, o nwere oke ochicho di ugbua, nke a na-etinye ya na ihendori na chiiz ma sie ya n’ime ite igwe na-acha anụnụ anụnụ. Chiiz na jikọrọ ọnụ na-eme ka caramelize na akụkụ pan ahụ, yabụ gbaa mbọ kpọọ dibịa mbụ na mpempe akụkụ ahụ.
Ebee inweta ya: Jet si
Njikọ: 18 Ihe Have Ga-eri ma ọ bụrụ na ị na-akpọ onwe gị a Chicagoan
kasị mma akụkọ ịhụnanya hausa movies
ntutu isi maka ntutu isi
arụrụ n'ụlọ ọgwụ maka ntutu daa na dandruff
Hollywood nkiri maka ụmụaka
ịkpụ ntutu maka ọdịdị ihu dị iche iche